Shenzhen Joint Technology Co., Ltd yasekwa ngo-2006, yophawu lorhwebo ebhalisiweyo 'jointech', yaye formallylisted kwibhodi entsha emithathu ngoFebruwari 2016, kunye ikhowudi stock: 835897.
Le nkampani ugxile ekuboneleleni networking zentetho izisombululo zolawulo monitoringand asethi ezihambayo, kwaye lizibophelele ukuba ulawulo lweempahla ababoneleli isisombululo leadingmobile kushishino kunye nabaqhubi. Emva kweminyaka ofdevelopment kunye ulwandiso, inkampani liphuhlise epheleleyo iseti ofintelligent hardware kunye mobile nolawulo lwempahla software ilifu managementplatform, ukubonelela emarikeni kunye software ne-hardware iimveliso kunye neenkonzo, nto leyo phambili, esisebenzisekayo, kunye nokuselwa regardenergy kunye nolawulo zokhuseleko lwempahla njengoko core ixabiso.
Eyona ishishini Thecompany bugubungela ziqwempu ezintathu ezinkulu zolawulo lwempahla yobekelo kude, kuquka: 1. Iinkonzo isithuthi kunye amafutha online esweni kunye nolawulo, kwiinkampani umqhubi sithuthi kuzixhalabisa amafutha kunye vehicleposition; 2.the yonke inqubo isikhongozeli kunye imithwalo esweni kunye nolawulo; abaxhasi abo inkxalabo enkulu yokhuseleko impahla kunye nokuthuthwa; 3.remotemonitoring kunye nokusebenza iinkonzo zenethiwekhi, kuba amandla kunye iimveliso powerequipment kunye nenkampani nokulondoloza.
Ikwakhokela njengoononjineli kunye neminyaka engaphezu kwama-30 amava entsimini ulawulo auto, R yethu & iqela D ukugcina isantya ngeteknoloji eziphambili kakhulu ehlabathini, baza zavelisa ezininzi ezizodwa kunye software kunye patents. I-R & D iqela sele usebenza ngokusondeleyo kunye namaqabane kula mazwe 55 kunye nemimandla, yabambisana amaziko iziqu Shenzhen University, etc.Our R & D iqela yenziwe ezingaphezu kwama-30 iinjineli kunye isiqinisekiso zeMatriki kunye Midlevel zobugcisa, yaze yahlulwa-hlulwa: Hardware Group, Software Group, Testing Group, Project Group, kwaye iqela ucwangciso yeprojekthi; JOINTECH ukugcina ukubeka 8% ~ 15% of umthamo intengiso kwi-R & D ngonyaka ngamnye.
JOINTECH iye wakhe phambili ndawonye umgca umthamo 100,000 abenzi kwinqanaba amafutha withyearly, Umatshini uvavanyo lokuqala ngokunokwayo China for ngqo eliphezulu isivamvo kwinqanaba amafutha kunye 500pcs zovavanyo umthamo ngosuku.